Dr. Tint Swe's Writings: Diabetic neuropathy ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အာရုံကြောရောဂါ
ဆီးချိုရောဂါသည်တွေ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုဆေးတွေကို သုံးသင့်ပါသလဲ။ ကြွက်သားတွေ အားပျော့ပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ အင်အားအတွက် သုံးစွဲသင့်သော ဆေးဝါးများ နှင့် အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများကို ဖြေကြားပေးပါ။ အစားအသောက်တော့ ကောင်းကောင်း စားနိုင်ပါတယ်။ အားအင်တွေ ကုန်ခမ်းပြီး ကြွက်သားတွေ တင်းနေပါတယ်။
ဆီးချိုဖြစ်နေတာ ကြာသူတွေမှာ အာရုံကြောတွေကို ထိခိုက်တာကို Diabetic neuropathy ခေါ်တယ်။ ခြေထောက်မှာ ခံစားမှု နည်းလာတာကနေ စတယ်။ ဘယ်-ညာ နှစ်ဘက်လုံး ညီတူညာတူလို ဖြစ်မယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ အထက် တက်လာတယ်။ ထုံသလိုဖြစ်နေလို့ ထိခိုက်မိမှာကို ပိုးပြီးသတိထားရမယ်။ ထိခိုက်မိရင် အာရုံကြော အားနည်းတာရော သွေးလျှောက်တာ နည်းတာတွေကြောင့် အနာဖြစ်မယ်။ ပိုးဝင်မယ်။ ပျောက်ခဲတယ်။
Diabetic neuropathies ရှိနေပေမဲ့ ဘာမှ မခံစားဘဲလဲ နေသေးတယ်။ ဆီးချိုရှိနေသူတွေထဲ ၆ဝ-၇ဝ% မှာ တချိန်မှာ ဒီအဆင့်ရှိလာတယ်။ များသောအားဖြင့် ၂၅ နှစ်ကြာရင်ဖြစ်တယ်။ ခြေ-လက်တွေမှာ Pain နာတာ၊ Tingling ကျင်တာ၊ Numbness ထုံတာ၊ ခြေ-လက်တွေက ကြွက်သားတွေ လှီလာတာ၊ ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းတာ၊ Reflexes ခေါ်တဲ့တုန့်ပြန်မှု ပျက်စီးတာ၊ လမ်းသွားပုံမမှန်တာ၊ ထုံနေတာ သိပ်မသိ၊ ဖိတာကို သတိမထားမိရာကနေ Blisters and sores အပူဖူးနဲ့ အနာ ဖြစ်လာတတ်တယ်။
အာရုံကြောကို သက်ရောက်တာက ချက်ချင်း ဖြစ်လာတာနဲ့ နာတာရှည် ၂ မျိုးရှိတယ်။ Acute neuropathy (Neuritis) ရက်တိုဖြစ်တာက ဆီးချိုကို ထိန်းနိုင်ရင် သက်သာသွားတယ်။ ဖြစ်နေရင် ပူလောင်သလို ခံစားရနိုင်တယ်။ ညပိုင်းမှာ ပိုဆိုးတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Chronic neuropathy နာတာရှည်က ပိုဆိုးတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တာတွေ ရှိတယ်။
Diabetic neuropathy ကို အစဆုံး သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာက Vibrations တုန်ခါမှုကို မသိတာဖြစ်တယ်။ အဖြစ်နည်းပေမဲ့ လက်မှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆိုးတာက ပျက်စီးမှုဟာ ရာသက်ပန်ဖြစ်တယ်။ ဆီးချိုကို ထိန်းနိုင်ပေမဲ့ ဒီလို ဖြစ်နေတာက ပျောက်မသွားဘူး။ နောက် အာရုံကြောရောဂါတမျိုးက Paralysis involving single nerves အာရုံကြောတခုက လေဖြတ်တာ ဖြစ်တယ်။ နောက်တမျိုးက Painful types of neuralgia နာနေတဲ့ အာရုံကြောရောဂါ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကတော့ ဆီးချိုကို ထိန်းနိုင်ရင် သက်သာပါမယ်။
- Peripheral neuropathy အဖျားပိုင်းအာရုံကြောတွေ ထိခိုက်တာက အများဆုံးဖြစ်တယ်။ Peripheral neuropathy ကို Distal symmetric neuropathy လဲခေါ်တယ်။ sensorimotor neuropathy လို့လဲခေါ်တယ်။
- Autonomic neuropathy ထဲမှာ ချွေးထွက်များတာလဲပါတယ်။ သွေးဖိအား၊ အဆုပ်နဲ့ မျက်စိ အာရုံကြောတွေ၊ နောက်ပြီး သွေးထဲမှာ သကြားဓါတ်ကျနေတာကို သတိပေးစနစ်အားနည်းမယ်။ Hypoglycemia Unawareness သွေးထဲမှာ သကြားဓါတ် နည်းလာရင် (Blood glucose below 70 mg/dL) လက်-ခြေတုန်လာမယ်၊ ချွေးပြန်မယ်၊ ရင်တုန်မယ်။ အခုရောဂါရလာရင် ဒီလိုသတိပေးချက်တွေ အားနည်းလာမယ်။
- Proximal neuropathy ကြောင့် ပေါင်၊ တင်ပါးနေရာတွေနာမယ်။ ခြေထောက်ပိုင်း အားနည်းနေမယ်။
- Focal neuropathy ကြောင့် ဖြစ်တဲ့နေရာက အာရုံကြော အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အားနည်းနေမယ်။ နာနေမယ်။ ဥပမာ မျက်စိ၊ မျက်နှာကြွက်သား၊ နား၊ ဗိုက်အောက်ပိုင်း၊ ရင်ပတ်၊ ဗိုက်၊ ပေါင်၊ ခြေသလုံး၊ ခြေထောက်။
Autonomic nervous system (ANS) (အော်တိုနောမစ်) အာရုံကြောစနစ်ကိုလဲ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ အစာစားပြီး ဗိုက်ကယ်နေမယ်။ အစာမကျေ၊ ပျို့ချင်၊ အန်ချင်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းချုပ်၊ မတ်တပ်ရပ်ချိန်မှာ ခေါင်းမူးတာ၊ ဆီးအသွားရခက်၊ အားယုတ်၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျပြီး၊ စိတ်ဓါတ်လဲကျ။ မတ်တပ်ရပ်ချိန် သွေးဖိအားတက်၊ မတ်တပ်ရပ်ရင် ခေါင်းမူးမယ်။ Fainting ဖြစ်မယ်။ Erectile dysfunction (ED or Impotence) ယောက်ျား ပန်းသေ-ပန်းညှိုး၊ မိန်းမ ဗဂျိုင်းနား ခြောက်သွေ့မယ်။
• Mild painkillers အနာသက်သာဆေး သိပ်မပြင်းတဲ့ Paracetamol or Aspirin တခုခု၊
• Antidepresant drugs စိတ်မကျဆေးဖြစ်တဲ့ Antidepressants (Amitriptyline, Imipramine, Desipramine, Duloxetine (Cymbalta), Venlafaxine, Bupropion (Wellbutrin), Paroxetine (Paxil), and Citalopram (Celexa) တွေ၊
• Anticonvulsants အတက်သက်သာဆေး = Pregabalin (Lyrica), Gabapentin (Gabarone, Neurontin), Carbamazepine, and Lamotrigine (Lamictal) ဆေးတွေ၊
• Opioid painkillers ဘိန်းပါတဲ့ အနာသက်သာဆေး အပြင်းစား Tramadol (Zydol) or Dextropropoxyphene ကိုလဲ တခြားဆေးတွေနဲ့ မရရင် သုံးနိုင်တယ်။
• Lidocaine patches (Lidoderm, Lidopain) ဆေးကပ်ခွါ၊
• Nitrate sprays or patches ဖြန်းဆေး၊
• Alpha-lipoic acid Evening primrose oil တိုင်းရင်းဆေး၊
• Capsaicin cream (Zacin) ခြေထောက်နာနေတာကို လိမ်းနိုင်တယ်။
• Electrical stimulator (TENS machine) လျှပ်စစ်နည်းနဲ့ ဆေးရုံမှာ လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
• Compression stockings ခြေအိပ်ကြပ်တာ စွပ်ထားရင် မတ်တပ်ရပ်လို့ မူးတာ သက်သာစေမယ်။
• Nausea and vomiting အန်ချင်တာအတွက် Metoclopramide သောက်နိုင်တယ်။
• Codeine phosphate နဲ့ တခြား ဝမ်းရပ်ဆေးတခုခုကို ဝမ်းပျက်တာ မရပ်ရင် သောက်ပါ။
Good advice အကြံပေးချက်များ
• ဆီးချိုကို နေ့စဉ်ထိန်းနေပါ။
• ဖိနပ်၊ ရှူး အနေတော်တာကိုသာ စီးပါ။
• ခြေသည်း၊ လက်သည်းဖြတ်တာ ဂရုစိုက်ပါ။
• ခြေထောက်ကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးပါ။
• ထိခိုက်တာ၊ အနာပေါက်တာဖြစ်ရင် သေးသေး ကြီးကြီး ဆရာဝန်ပြပါ။
• မေးတဲ့သူက အစားအသောက်တော့ ကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဆီးချိုရှိသူတွေ စားရမှာတွေကိုသာ စားပါ။
Burmese Spelling မြန်မာသတ်ပုံ
HIV and AIDS by the Numbers (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ-အေအို...
Pregnancy and weight gain ကိုယ်ဝန်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်
Factor VIII ဖက်တာ-အိတ်
Flower buds ဖူးငုံခြောက်ပန်း
Hepatitis C အသည်းရောင် (စီ) ကာကွယ်ရေး
Avamigran အဗာမိုက်ဂရင် ဆေး
Migraine and Contraceptives ကိုယ်ဝန်တားဆေး-တားနည်း...
Migraine (2) မိုင်ဂရင်း (၂)
Migraine (1) မိုင်ဂရင်း (၁)
The latest, not the last photo shot နောက်ဆုံးရဓါတ်ပုံ
Letpadaung hunting လက်ပံတောင်းမှာ သမင်ပြစ်ထွက်ခြင်း
Vitamin B12 and Iron supplement ဘီ-၁၂ နှင့် သံဓါတ်...
Vitamin K ဗီတာမင် (ကေ)
Thai parliament votes to ban commercial surrogacy ...
Black Vs White (အင်စတီကျူးရှင်း) တိုက်ပွဲ
The Book Vs the Author စာအုပ် နဲ့ လူ
Foods for Healthy Hair ဆံပင် အာဟာရ
Soft Hair ဆံပင်မကြမ်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မရမလဲ
Incurable disease ကုရတဲ့ရောဂါနဲ့ ကုမရတဲ့ရောဂါ
Steel yourself ပြင်မရရင် ပြင်ကြ
Penis Injection Risks ကျားအင်္ဂါဆေးထိုးတဲ့ အန္တရာယ်တွေ
Poverty eradication ဆင်းရဲကြ၏၊ ဆင်းရဲပါသလား
Bleeding Peptic Ulcer အစာအိမ်နာ သွေးယိုခြင်း
Nipple discharge နို့ကနေ နို့မဟုတ်တာ ထွက်ရင်
Hepatitis အသဲရောင်ခြင်း အမျိုးမျိုး
HbsAg (ဘီ) ပိုး မေးခွန်း
November 2014 နိုဝင်္ဘာမှာ မှတ်စရာ
Liver cancer early detection အသည်းကင်ဆာ စောစောဘယ်လ...
Liver function tests အသည်းအလုပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါ (အင်ဇိ...
Liver Transplant Matching Criteria အသည်းချင်း တူကြ...
FB at glance ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်
Diabetic neuropathy ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အာရုံြေ...
Dyspareunia (1) ဆက်ဆံချိန်မှာ နာကျင်တာ (၁)
Dyspareunia (2) ဆက်ဆံချိန်မှာ နာကျင်တာ (၂)
Isotretinoin (Sotret) ဝက်ခြံဆေး
Yogurt reduces diabetes risk (ရောဂတ်) စားခြင်းဖြင်...
Pregnancy and x-ray at airport ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ လေ...
Vaginal rings သန္ဓေတား သားရေကွင်း
Female Viagra အမျိုးသမီး ဗိုင်ယာဂရာ
Female Libido အမျိုးသမီး “စိတ်” နည်းနေခြင်း
Libido in Women အမျိုးသမီး စိတ်နည်းနေခြင်း
Top Four လေးပွင့်မဆိုင်သေးတဲ့ ထိပ်သီးလေးဦး
Why coat apple fruits ဖယောင်းသုတ် ပန်းသီး
DASSK and VOA 23-11-2014
Nose Plastic Surgery နှာခေါင်း လှချင်သူ
Endometriosis (2) သားအိမ်ရောဂါ (၂)
Refugees and asylum seekers from Myanmar are payin...
One French Kiss Swaps 80 Million Bacteria
First Aid Manual ရှေးဦးသူနာပြုလက်စွဲ
Pityriasis rosea အရေပြားနာတမျိုး
Polycystic Kidney Disease ကျောက်ကပ်ရောဂါ
Proctitis စအို ရောင်ခြင်း
Scleroderma (စကယ်လရိုဒါးမား) အရေပြားမာတဲ့ရောဂါ
Severe Burn Treatment ဆိုးဝါးတဲ့ မီးလောင်နာ
SII RABIVAX ခွေးရူးရောဂါကာကွယ်ဆေး
Skin Problems အရေပြားမှာ အဖြစ်များတာတွေ
Steroids and Moriamin အားကောင်းလွန်းတဲ့ ဆေးတွေ
Subdural effusion ဦးနှောက်-အလွှာအောက်မှာ အရည်လာအော...
Triglyceride and Sinus bradycardia နှလုံးခုန် နှေး...
Urine smell ဆီးနံ့
Next Election ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲကျင်း...
Constitutional dictatorship ဖွဲ့စည်းပုံအာဏာရှင်
Dry scaling skin အရေပြား ခြောက်ကွာနေတာ ဘာလုပ်ရမလဲ
Healthy Skin အရေပြား ကျန်းမာရေး သတိပေးပါရစေ
Banyan tree ညောင်ကုသိုလ်
Paracetamol combo drugs (ပါရာစီတမော) ပူးတွဲဆေး သတိ...
Pregnancy Stages ကိုယ်ဝန်ဆောင် အဆင့်များ
Scar (2) အမာရွတ် (၂)
Winter night အညာဆောင်းည ပြန်မှတ်ရ
Crash diets ပိန်စာ
China slim Tea တရုပ် (ဆလင်းမ်) လက်ဖက်ရည်
Causes of sudden weight loss ကိုယ်အလေးချိန် မထင်မှ...
Waves မြန်မာပြည်မှာ လှိုင်းလုံးကြီးတွေထနေတယ်
Adolescent Health အရွယ်မရောက်တရောက်များ ကျန်းမာရေး
Food combination အစားအစာ ဘယ်လို တွဲစားသင့်ပါသလဲ
Digestive Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ
Khalid’s arrest sparks off debate on Rohingyas in ...
Rabbit hunter ယုန်မုဆိုး